Iyo Potato System magazini ndeye mutori wechikamu cheAGROSALON chiratidziro!
Nguva yebhizinesi! Iyo bhizinesi chirongwa chakaburitswa paAGROSALON yekuratidzira webhusaiti
Tora tikiti rako rerombo kuna AGROSALON!
Zvemishini yekurima paAGROSALON 2020
AGROSALON inozivisa kukwikwidza "Hupenyu hupenyu kubva kune murimi"!
Mikana mikuru yeminda midiki. Sakanidza NOVA kuAGROSALON-2020
Roseselmash ichaunza zvisina kukodzera masosi kukohwa masisitimu kuAGROSALON 2020
AGROSALON 2020 ichaitwa pamisi yakatangwa kare
Varongi vekuratidzira vakatevera kurudziro dzese dzeFederal Service yekuona nezveKodzero dzeVatengi Kudzivirirwa neHuman Welfare.
Kwemazuva mana ebasa AGROSALON yakashanyirwa nevanhu 22 vanobva makumi manomwe nematanhatu enhengo dzeRussian Federation. Pachivanhu, gore rino vagadziri vekurima vanogona kuuya vari muboka. Gore rino chiratidziro chakaitirwa mumiganhu yakavharwa yeRussian Federation, iyo yakaderedza huwandu hwevamiriri vedzimwe nyika. AGROSALON yakashanyirwa nenhumwa dzevamiriri nevamiriri venyika makumi maviri nemapfumbamwe, pamwe nemagavhuna nemakurukota ezvekurima kubva kumatunhu gumi eRussia.
AGROSALON 2020 yakapindwa nemakambani mazana maviri nemakumi matatu nematatu, kusanganisira makambani ekunze makumi manomwe nenomwe kubva munyika gumi dzepasi: Belarus, Brazil, Germany, Ireland, Spain, Italy, Poland, Russia, United States of America neCzech Republic. Nekuda kwekufarira kwakanyanya kwevashandi vekune dzimwe nyika, matende emunyika yeGerman neItaly akarongeka. Italy yakamirirwa nemakambani gumi nemasere uye Germany negumi nemanomwe.
Chiratidziro chakafukidza nzvimbo dzese dzemuchina wekurima uye chakaratidza zvinopfuura chiuru zvioniso, zvinosanganisira 379 mhando dzemuchina nemidziyo. Vashanyi veAGROSALON havana kungoona chete mhando nyowani dzemuchina wekurima, asi vakagadzirisazve shanduko dzemuchina uripo.
Chirongwa chebhizimusi cheAGROSALON 2020 chaisanganisira zviitiko zvinopfuura makumi maviri, izvo zvakapindwa nemisoro yemitumbi yehurumende, vagadziri vemidziyo, varidzi vezvinhu zvekurima, vakuru vevashandi nemasangano evatengesi, nyanzvi dzemakambani nema media.
Musi waGumiguru 5, manheru ekuratidzira, Russian Agrotechnical Forum yakagara ichiitwa, musoro wenyaya waive "Agro-maindasitiri akaomarara nedambudziko recovid: mhedzisiro, zviitiko zvekuvandudza, ramangwana". Iyi foramu yakapindwa neMutevedzeri wegurukota rezvemaindasitiri nekutengeserana kweRussia Federation Alexander Morozov, Director weDhipatimendi reZvirimwa Zvigadzirwa, Mishini, Kemikari uye Kudzivirirwa Kwezvirimwa kubazi rezvekurima reRussia Roman Nekrasov, General Director weRosagroleasing JSC Pavel Kosov, Director wePegas-Agro Svetlana Linnik uye Group Manager. BSP-Agro Sergey Brovkov anobva kuRostov-on-Don.
Zuva rekutanga reAGROSALON rakatanga nemusangano wevatori venhau pachiitiko chekuvhura kwekuratidzira, panguva iyo Sachigaro weKomiti Yekuratidzira Andrey Efimov, Mutungamiri weRosspetsmash Association Konstantin Babkin naGeneral Director weVDMA Russia Association Sven Flasshoff vakaita hurukuro Nhengo dzedare rekuratidzira dzakataura nezve mafambiro ekusimudzira eindasitiri yemuchina wekurima uye vakazivisa huwandu hukuru hwekuratidzira.
Round tafura, masemina uye misangano zvaive zvimwe zviitiko zvakakosha zveAGROSALON bhizinesi chirongwa.
Musangano wakawandisa uye waive nehupenyu yaive "Nzira yekuMukaka Wakakura: Kutenga Kwefuru Pasina Zvikanganiso" Moderator aive Tatiana Nagaeva, Director General weMilk Institute, nyanzvi. Dziva revatauri raisanganisira vamiriri vemakambani anozivikanwa vane ruzivo rwakakomba munzvimbo ino: Agronout, Agrostat, Barenbrug, VMT Agro, Golovkovo, EuroChem Trading Rus, KVS RUS, Krasnokamsky RMZ », Rostselmash, Kverneland, Kuhn, Krone naPöttinger. Vatauri vakagovana zvakavanzika zvavo kubatsira varimi vekumba kuti vabudirire uye vabudirire.
Vamiriri veChamber of Commerce neindasitiri yeRussia, iyo Ministry yeindasitiri nekutengeserana yeRussian Federation, iro Ministry rezvekurima reRussian Federation, FSUE NAMI naRosselkhozbank vakapinda muchiitiko cheAgrocomponent zone.
Pakati pezviitiko zvakakosha zveAGROSALON kusaina zvibvumirano. Semuenzaniso, Rosagroleasing akaita misangano yevatungamiriri nevakagadziri vemuchina wekurima uye vamiriri vematunhu. General Director wekambani Pavel Kosov akasaina zvibvumirano zvekudyidzana nematunhu matatu, uye mutevedzeri wake Alexander Suchkov akasaina zvibvumirano zvishanu nevagadziri vemidziyo.
Munguva yekuratidzira, General Director weGomselmash Alexander Novikov akasaina zvibvumirano zvitatu zvekudyidzana: neMutevedzeri Wasachigaro weKurukota reMakurukota eChuvash Republic - Gurukota rezvekurima Sergei Artamonov, pamwe neMutevedzeri weGurukota reRyazan Dmitry Filippov uye negurukota rezvekurima uye Chikafu cheRyazan Region Boris Shemyakin.
Petersburg Tarakita Plant yakasaina chibvumirano neMutevedzeri weGurukota reHurumende yeRepublic of Belarus uye Gurukota rezvekurima reChuvash Republic kuti vawane michina yemazuvano pamamiriro akakwana ekutenga.
Basa rekambani yeRostelmash nematunhu raive rakasimba uye riine zvibereko. Pamusangano uyu, chirimwa chakasaina zvibvumirano zvina zvekushandira pamwe neOrenburg neKursk matunhu, pamwe nenyika dzeChuvashia neBashkortostan.
Musi waGumiguru 8, pakuratidzira kweAGROSALON 2020, Mutevedzeri weGurukota reRussia Yuri Borisov akasangana nezvazvino kuitika kweiyo epamba yekurima michini indasitiri. Mutevedzeri weGurukota aiperekedzwa nemutevedzeri wemusoro webazi rezvemaindasitiri nekutengeserana kweRussia Alexander Morozov, Mutungamiri weRosspetsmash Association Konstantin Babkin uye Director weRosspetsmash Association Alla Elizarova.
Makambani eAltai Agricultural Engineering Plant, Almaz, Voronezhselmash, Eurotekhnika, Claas, Navigator-New Machine Building, Pegas-Agro, Petersburg Tractor Plant neRostselmash vakaratidza michina yavo kuna Yuri Borisov. Matarakita emazuva ano, mubatanidzwa, mapfapfaidza, mabhawa, mhodzi, mhombwe, zvinomesa zviyo nemimwe michina zvakaunzwa kumasitendi.
Mutevedzeri weGurukota akazivanawo nemabasa evatambi vari kutora chikamu mumutambo wePositive Ideological Art "Nguva Mberi!"
Pakupera kwekushanya, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakapinda muchirongwa chekuyedza chemubatanidzwa weRostselmash smart, panguva yaakakwanisa kuzvionera ega mashandiro emagetsi.
Iko kucherechedzwa kwakakosha kwevaenzi veAGROSALON kwakakundwa nemidziyo yakakunda yakazvimirira nyanzvi kukwikwidza kwehunyanzvi AGROSALON. Pakazara, makumi mana nematatu zviitiko kubva pasirese zvakapihwa kumakwikwi, ayo akanakisa akasarudzwa nedare rezvematongerwo enyika. Zvigadzirwa 47 zvitsva zvakapihwa menduru, mashanu acho akagamuchira goridhe nesirivha gumi nemana. Menduru dzegoridhe dzeAGROSALON 19 Innovative Technology Competition dzakapihwa kuvandudza kweRostselmash, Amazone, Claas, Rauch naVäderstad. Yese mibairo yakapihwa yakaunzwa mudzimba dzekuratidzira. Iyi mhemberero yekupa menduru uye madiploma ekuremekedza emakwikwi aya akaitwa munzvimbo yekuremekedza muna Gumiguru 5 padanho rekuratidzira.
Zuva rekupedzisira rekuratidzira raiwanzoitwa kune vechidiki. Vadzidzi vanobva kumayunivhesiti anotungamira ekurima eRussia vakauya kuzonyura munyika yemuchina wekurima wenguva yemberi. Nyanzvi dzechidiki dzakakwanisa kwete chete kukwidza mwero weruzivo, asiwo kuwana vashandirwi mune ramangwana pakati pevatori vechikamu.
AGROSALON inoitirwa pan-European fomati - kamwe chete makore maviri. Chiratidziro chinotevera chichaitwa kubva musi wa 4 kusvika 7 Gumiguru 2022 uye haingofadze chete vashanyi nevatori vechikamu vane zvigadzirwa zveindasitiri, asi zvakare kubatanidza vese vatori vechikamu vemaindasitiri!